Nyora Yangu Yekupedzisira Pepa: Bhadhara Pamhepo Yako Pachezvako Munyori muZimbabwe
Nyora Temu Rangu Rekunyora muZimbabwe Kuti Ugobuditsa Mhedzisiro Kaviri nekukurumidza!
Vanyori vezvidzidzo vakakodzera uye 24/7/365 rutsigiro, izvozvi zvava kuwanikwa muZimbabwe! Isu tinopa Type Yangu Temu Pepa masevhisi uye tine hanya nezve yako nguva Uye kuvanzika
Mhando dzeTemu Mapepa - Yekutsvagisa Pepa PowerPoint 2021
Zvakaipa kuodha yako Type Yangu Temu Pepa nefeksi? Muchokwadi, pane zvikonzero zvakanaka zvinoverengeka nei uchifanira kuve nebasa iri kana iwe ukazviwana iwe uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchinge uchingoda kurongedzwa patsva kwemapepa ako. Kune imwe chete, unogona kudzivirira kushandisa nguva yakawanda uchitsvaga mareferensi akakodzera kana sosi. Paunenge uri gore rekutanga mudzidzi wepayunivhesiti uye iwe uchingotanga nekunyora mapepa akareba ezvidzidzo, zvingave zvakanaka kutendeukira kune nyanzvi kuti uwane mamwe mareferenzi ekuti usatiza uchiita basa rako wega, asi kuti udzidze kuita aya mabasa wega wega gare gare mune ramangwana. Nenzira iyi, iwe unodzidza maitiro ekushandisa zvizere zviwanikwa zvako uye kutapudza pane isingadiwe nguva yakashandiswa mukutsvaga.
Paunenge uchitsvaga masevhisi anozokubatsira kutaipa yako Type Yangu Nguva Mapepa nefeksi, edza kutsvaga kambani inokupa iwe kukosha kwakanaka kwemari yako. Mune mamwe mazwi, usafadzwe neese maficha maficha ayo makambani anoti aanopa, sezvo iwo anogona kunge asina chero anoshanda anoshanda pane zvaunoda. Iwe unogona kutomboedza kuenda wakananga kune sosi kunotsvaga iyo kambani inokupa iwe chaiyo sevhisi nemitengo yakaringana - mamwe acho anga aripo kweanopfuura makore makumi maviri, chinova chinyorwa chinoyevedza, chinotaura chimwe chinhu nezve kuvimbika kwavo. Usakanganwa kutarisa wongororo pawebhusaiti yavo, futi.
Nekudaro, sezvakataurwa, iwe unofanirwa kungwarira nemakambani anoti anogona kukupa mutengo wakakura nekuti ivo vari kupa sevhisi inonzi 'sis template'. Izvi hazvina kunyatsosiyana nemapepa ezvinyorwa anotengwa nevamwe vadzidzi kukoreji, kunze kwekuti ivo vanouya nesoftware. Iyi software inouya neakasiyana maficha, zvinoreva kuti zvinokwanisika kugadzira yakasarudzika, yekutanga seti yezvinyorwa nekungobaya mashoma. Izvi zviri pachena kuti zvinonzwika zvinokwezva kune vadzidzi vakabatikana kuyunivhesiti vanoda rutsigiro rwekunyora, asi chenjera: haazi makambani ese ari kutengesa aya matemplate ari pamutemo, saka ita shuwa kuti unotenga kubva kune iyo yakavimbika. Chimwe chinhu chekucherechedza ndeye 'sis template' iyo isinganyatso kukupa iwe chero rudzi rwekutsigira chirongwa chako.
Paunonyora mapepa angu etemu nefakisi, kazhinji unongowana rondedzero yakanyorwa kare. Iyo kambani iri kukutengesera sevhisi inowanzo kukupa iwe bepa iro iwe raunofanirwa kutevedzera kunyora yako wega rondedzero. Iwe unogona kukwanisa kusarudza fonti yemhando yaunoda kushandisa, kunyangwe vanhu vazhinji vakanaka neArial kana Palatino. Iwe unogona zvakare kukwanisa kusarudza kuti iwe unoda kuti font itaridzike sei, kunyangwe izvi zvingangoenderana nerudzii rwepepa iyo kambani yaunoraira kubva iyo irimo muchitoro. Mazhinji makambani anotengesa mapepa epanguva nefeksi anokupa sarudzo pakati peblack nemuchena, kana sepia.
Kana iwe wakamboedza kunyora izwi repepa neruoko, iwe unoziva kuti inogona kuve inoshungurudza chiitiko. Kunyora izwi repepa kazhinji kunosanganisira kuumbiridza ndima dzinoverengeka uye kuyedza kukwana pamwechete mazano akati wandei muchidimbu chidimbu chekunyora. Kunyangwe munhu akarongeka kwazvo anowanzo shingirira kuwana zvese izvi pamwechete, uye anozopedzisira asiya. Nhau dzakanaka ndedzekuti kana ukanyora mapepa angu etemu nefeksi, unogona kuwana rondedzero yakanyorwa nekukurumidza uye pasina kunetseka kukuru kana kunetseka. Makambani mazhinji anotengesa aya marudzi ezvinyorwa zvakare anopawo ekutsigira masevhisi nenzira yeemail kana live chat.
Sei ungade kutaipa mapepa angu etemu nefeksi? Zviri nyore: vanhu vazhinji havadi kushandisa iyo nguva inodikanwa kuti vanyore mapepa emapepa nemaoko. Ivo zvakare havadi zano rekunyora rondedzero yemumwe munhu. Fax mu rondedzero inogona kuita kuti zvive nyore kuve nemhinduro ingangoita pakarepo kune chero mibvunzo iwe yaungave nayo pamusoro wenyaya wepepa rako rezwi. Aya marudzi ezvinyorwa anowanzo kupihwa mushure mekunge wazadza temu pepa fomu rinotarisa mhando yepepa raunoda kunyora. Mazhinji makoreji nemayunivhesiti anoshandisa seti yakasarudzika yezvinodiwa zverondedzero pane iya yakanyorwa pane chako chikumbiro.
Mazhinji makoreji anoda kuti iwe upedze angangoita mashanu awo usati wabvumidzwa kutora kirasi iyo inokodzera iwe degree rako kana chitupa. Kana iwe ukazadza mafomu zvisizvo, unogona kuzviwana iwe usina kukodzera kubva kunofungidzirwa kubvumidzwa. Ichi ndicho chikonzero zvakakosha kuti uve nechokwadi chekuti unosarudza zvemhando yepamusoro, vanyori vezvinyorwa vanokwanisa kuburitsa zvinyorwa zvemhando yepamusoro vachishandisa mazwi avo uye maitiro ekuongorora. Mazhinji makambani anotengesa rondedzero kunyora rutsigiro masevhisi zvakare ane masevhisi aripo ekubatsira nekunyora ako epamhando ekutsvagisa mapepa.
Vamwe vanhu vanofunga kuti kushandisa rondedzero yekunyora sevhisi zvakafanana nekuve neyekunyora kunyora mubatsiri. Muchokwadi, izvo hazvisizvo chaizvo. Kana iwe ukanyora ako wega temu mapepa, iwe unodzora maitiro, chimiro, fomati uye mutauro. Iwe unosarudza kuti yakawanda sei midziyo yekutsigira iwe yauchasanganisira uye kuti uchagumisa sei nharo dzako. Sevhisi ichakubatsira neizvi.